पाइलट शेर्पाको सहि समयमा गरेको यो एउटा चलाखीले ७७ जनाको ज्यान बाँचेको थियो ! – Kavrepati
ऋषि धमलाकी पत्नी एलिजाले सामाजिक संजाल तताउदै, देखिइन् अहिलेसम्मकै बोल्ड अवतारमा (तस्बिर सहित)
माल्टामा राम्रो तलबमा रोजगारीको अवसर, थप जानकारीको लागी !
यिनै हुन् आज भएको दुर्घटनामा अकालमै ज्यान गुमाएका बाबु छोरा
चितवनमा इतिहाँसमै सवैभन्दा वढि….
मुकुन्द घिमिरेले गरे ‘इन्गेजमेन्ट’ , को हुन् युवती ?
सु’म्सुम्याउँदा कुकुरले खाइदियो मोडलको ओ’ठ, उपचार गर्न ५ करोड खर्च
Home / समाचार / पाइलट शेर्पाको सहि समयमा गरेको यो एउटा चलाखीले ७७ जनाको ज्यान बाँचेको थियो !
पाइलट शेर्पाको सहि समयमा गरेको यो एउटा चलाखीले ७७ जनाको ज्यान बाँचेको थियो !
admin September 28, 2021	समाचार Leaveacomment 146 Views
काठमाडौं। क्याप्टेन एजी शेर्पाले उडान भर्न थालेको २४ वर्ष भयो । बुद्ध एयरको स्थापना कालदेखि नै उनी आबद्ध छन्। अनुभवका हिसाबले उनी निकै खारिएका पाइलट हुन्। हरेक दिन, हरेक घण्टाको उडान उनलाई निकै सहज र सामान्य लाग्छ । पाइलटको लागि उडान भर्नु ठूलो कुरा पनि भएन । २४ वर्षे उडान अनुभवमा शेर्पाले हजारौँ यात्रुहरूलाई गन्तव्यमा पुर्‍याए। तर सोमबार उनले सोचेका थिएनन्, जहाजमा रहेका ७७ जना यात्रुलाई मैले सकुसल एयरपोर्टमा अवतरण गराउँछु भनेर।
सोमबार बिहानको घटना हो । बिहान ८ बजेर ३३ मिनेटमा काठमाडौंबाट ७७ जना यात्रु बोकेर उनी विराटनगरतर्फ उडान भर्दै थिए। विराटनगर पुग्दै लाग्दा एयर ट्रफिक कन्ट्रोल रुममा अवतरण गर्ने जानकारी पनि गराए उनले। जहाज अवतरण गर्ने वेला भएपछि उनले जहाजको चक्का डाउन गर्न खोजे । तीनवटा चक्कामध्ये एउटा चक्का डाउन नै भएन।
जहाज अवतरण गर्नको लागि जहाजको इन्जिनले ग्रिन सिग्नल संकेत पनि दिएन । जसलाई थ्री ग्रिन सिग्नल भनिन्छ। तीनवटा सिग्लन ग्रिन देखिएमा मात्रै जहाज सामान्य अवतरण हुन्छ । नत्र जहाजको इन्जिन वा चक्कामा समस्या भएको भन्ने बुझिन्छ । पाइलट शेर्पाले उडान भरेको जहाजले निकै अशुभ संकेत दियो । ल्यान्डिङ गियर डाउन भएन । पाइलटहरूका अनुसार जहाजमा आउने यो समस्यालाई सामान्य मानिँदैन । उनले भने, ‘मलाई त यति सहजै अवतरण गरिन्छ जस्तो लागेको थिएन, मैले धेरै नै सोचिसकेको थिएँ, तर विराटनगरबाट काठमाडौं एयरपोर्टमा आइपुग्दा जहाजले थ्री ग्रिन सिग्नल दियो, मैले पनि निकै ध्यान दिएको थिएँ।’
विराटनगरमा जहाज अवतरण गर्न सकिने अवस्था नभएपछि उनी काठमाडौं फर्किए। जहाजभित्र ७७ जना यात्रु थिए। एटिसी टावर र जहाजका इन्जिनियरहरूलाई क्याप्टेन टोलीले जहाजको अवस्थाबारे जानकारी गरायो। एटिसी टावरले काठमाडौंतिरै ‘मुभ’ हुन भन्यो। त्यसलगत्तै पाइलट शेर्पाले जहाजलाई काठमाडौंतर्फ फर्काएका थिए। उनले जहाजमा इन्धनको मात्रा धेरै भएकोले आकस्मिक वा संकटकालीन अवतरणलाई ध्यानमा राख्दै ‘फ्युल वर्न’ गरे। यसो गर्दा जहाजको तौल कम हुन्छ। जमिनमा बजारिए पनि ठूलो क्षति वा आ’ग’ला’गी हुनबाट बच्छ।
काठमाडौं विमानस्थल आइपुगेपछि पाइलट शेर्पाले चार/पाँच फन्को घुमाए। केही बेर जहाजलाई आकाशमै होल्ड गरे। त्यतिञ्जेल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दुरबिन लगाएर हवाई इन्जिनियरहरूले जहाजको चक्का र इन्जिन जाँच गरे। पाइलटले एटिसी टावरसँग कुरा गर्दै जहाज घुमाइरहेका थिए। जाँच गर्दा जहाजमा खासै समस्या देखिएन। त्यसपछि एटिसी टावरले अवतरण गर्ने अनुमति दियो। पाइलट शेर्पाले ल्यान्डिङ गेयर (डाउन गरे) तल झारे । अब चाहिँ जहाजले थ्री ग्रिन सिग्नल दियो। चक्का आँफै डाउन भयो। त्यसपछि पाइलट शेर्पाले बिहान १० बजेर १६ मिनेटमा जहाजलाई अवतरण गराए। जहाजको टायरले भुइँ छोएपछि सबै यात्रुहरू झसंग भए। खुसीले ताली पिटे। झन्डै मृत्युको मुखमा पुगेका उनीहरूले अर्को जीवन पाएझैँ महसुस गरे । यो अनुभव पाइलट शेर्पाले २४ वर्षसम्मको पाइलट जीवनमा नभोगेको अनुभव हो।
आजसम्म उनले सयौँ उडान भरे। ती सबै सामान्य नै रहे। तर आज बिहानको उडान उनको पाइलट जीवनकै अविस्मरणीय क्षण बन्यो। ‘यात्रुहरू निकै ड’राइ’रहनुभएको थियो, तर म डराएको भए जहाज बीचमै खस्थ्यो होला, त्यो अवस्थामा म निकै सतर्क भएँ, सेकेन्ड सेकेन्डमा जहाज कतातिर मोडेको छु याद गरेँ, एयर होस्टेसहरू पनि हाई अलर्टमा रहेर मलाई साथ दिए,’ उनले सुनाए, ‘अवस्था त निकै चुनौतीपूर्ण थियो, तर आशा मारेको थिइनँ।’ उनले यात्रुहरू चिच्याएको आवाज अगाडिसम्म सुनिए पनि त्यसले आफूलाई नबिथोलेको र आफू निकै एकाग्र भएर उडान भरेको बताए । स्रोत -नया पत्रिका
Previous चालकदलसहित ७७ यात्रुको ज्यान बचाएपछि शेर्पा बने ‘रियल हिरो’
Next कतारमा झुक्याएर पे’ट बो’काउने कपुर बमले गर्भवती श्रीमतीलाई कु’ट’पि’ट ग’रेर रातारात मुगु फरार (भिडियो सहित)
नेकपा एमालेको महाधिवेशनका कारण चितवनमा ग’र्भनिरो’धक अस्थायी साधनको बिक्री बढेको छ । बजार क्षेत्रका औ’षधी …